खोप कमिसन प्रकरणमा प्रम केपी ओली आफै संलग्न हुनुभयोः गगन थापा. - Supportive Nepal
खोप कमिसन प्रकरणमा प्रम केपी ओली आफै संलग्न हुनुभयोः गगन थापा.
May 7, 2021 May 7, 2021 News NepalLeaveaComment on खोप कमिसन प्रकरणमा प्रम केपी ओली आफै संलग्न हुनुभयोः गगन थापा.
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेत तथा सांसद गगन कुमार थापाले खोप प्रकरणमा सार्वजनिक तथ्यले यसमा अनियमितता मात्रै नभएर अपराध भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि उनले गम्भीर टिप्पणी गरेका छन् ।
यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले जो आरोपित हो उनैलाई छानबिन गर भन्नुको केही अर्थ नभएको पनि बताएका छन् ।उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्(” खोप प्रकरणमा सार्वजनिक तथ्यले प्रस्ट पार्छ(जे भयो त्यो अनियमितता मात्र होइन I
अपराध हो र त्यो सवबै ज्यूलाई थाहा थियो तर,रोक्नुभएन अर्थात् आफै संलग्न हुनुभयो।जो आरोपित छ उनैलाई छानबिन गर भन्नुको केही अर्थ छैन।संसदले यो अपराधको जरासम्म पुगेर छानबिन गर्ने दायित्व पुरा गर्नुपर्छ।”
यो पनि पढ्नुहोस्: शरिरमा अक्सिजनको मात्रा ठिक राख्न र फोक्सो बलियो बनाउन यस्ता चिज खानुहोस् । काठमाडौ : पूरै देश महामा’रीमा परेको छ । हरेक नागरिक कोरो’नावाट जोगीने अनेक उपाय अपनाइरहेका छन् । व्यक्तिले सबै नियमहरू पालना गर्न थालेको छ I
शारीरिक दूरी बनाउने देखि मास्क लगाएर को’रोनावाट बच्ने उपाय गरिरहेका छन् । सबैलाई कोरो’नाबाट टाढा रहन यति मात्र प¥र्याप्त छैन। यस्तो अवस्थामा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामी आफैं र आफ्नो शरीरलाई यति धेरै तयार गरौं कि कोरोना भए पनि, यो हल्का हुन सक्छ I
र हामी यसलाई सजीलै पार गर्न सक्छौं। यसको लागि, सबैभन्दा पहिले, हामीले हाम्रो फोक्सोको स्वास्थ्यलाई बलियो राख्नु पर्छ। यदि फोक्सोले राम्रोसँग कार्य गर्दछ भने शरीरमा अक्सि’जनको स्तर पनि सजिलैसँग पुग्छ । यस्तो अवस्थामा फो’क्सोको विशेष ख्याल राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
को’रोनाले फो’क्सोमा सिधा ह म ला गर्दछ, त्यसपछि सास फेर्ने समस्या हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, हामीले पहिले नै फो’क्सोलाई बलियो बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ। त्यसोभए फो’क्सोलाई बलियो राख्नको लागि खानामा के चीजहरू समावेश गर्न सक्दछौं जानौं।
लसुन : लसुन एन्टिबा’योटिक, एन्टि’फंगल, एन्टि’भाइरल गुणहरूको साथसाथ क्याल्सियम, फास्फोरस, फलाम, भिटामिन जस्ता तत्त्वहरूले समृद्ध हुन्छ जुन फोक्सोलाई बलियो राख्न लाभदायक छ। बिहान, खाली पेटमा पानीको साथ २ देखि ३ लसुनको पाटी खाने गर्दा पनि लाभ मिल्छ ।
बेसार : बेसारमा (ऑक्सीडन्ट र एन्टी(इन्फ्लेमेटरी गुणहरू हुन्छन् । जसले तपाईंलाई कुनै पनि प्रकारको सं क्र म णबाट बचाउँछ। यस्तो अवस्थामा सु त्नु अघि तातो दुधमा वेसार राखेर सेवन गर्नुहोस्। गुर्जो, दालचीनी, लसुन, अदुवा र तुलसीलाई वेसार मिसाएर काँडा बनाउनुहोस्।
राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको लागि गहृमन्त्री बादलको उम्मेदवारी दर्ता
उम्मेदवारी दर्तापछि बादलले भने : मेरो जित सुनिश्चित छ (भिडियोसहित)
September 3, 2021 News Nepal
September 14, 2021 News Nepal